Faarax C/qaadir oo qarka u saaran inuu la wareego kursigii Beesha Ujeejeen ee Aqalka Sare | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Faarax C/qaadir oo qarka u saaran inuu la wareego kursigii Beesha Ujeejeen ee Aqalka Sare
Iyadoo la filayo in dhowaan la soo gudbiyo Liiska Musharaxiinta xubnaha Aqalka sare ee Maamulka Hirshabeelle ayaa waxaa soo baxaya warar sheegaya in Kursigii Beesha Ciise Muddullood kaga soo geli laheyd Gobolka Hiiraan la doonayo in la duudsiiyo.
Inkastoo horay loo soo bandhigay shaxda beelaha u qeybsanayaan Aqalka sare ee Maamulka Hirshabeelle ayaa waxaa muuqanaya in wax ka bedel lagu sameeyay, isla markaana uu is qab qabsi ku yimid.
Shaxda xubnaha beelaha ee Aqalka sare ee Gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ayaa aheyd in saddex xubnood ay ku yeeshaan Beellaha Muddullood, sida Udeejeen iyo Abgaal, waxaase soo baxaya warar sheegaya in xubintii Beesha Udeejeen ee Ciise Muddulood la qaatay.
Warar soo baxaya ayaa sheegaya in Faarax C/qaadir oo ah saaxibka Madaxweyne Xasan Sheekh uu dadaal u galay sidii beesha reer Ow Xasan loo siin lahaa hal xubin oo Aqalka sare ah, taas ayaana la leeyahay waxay sababtay in Liiska laga saaro xubintii beesha Udeejeen.
Musharaxa lagu waday inuu ka soo muuqdo Liiska ayaa ahaa Prof. Cusmaan Dufle oo ka soo jeeda Beesha Ciise Muddulood-Udeejeen, waxaana hadii uu shaqeeyo damaca Faarax C/qaadir uu noqonayaa mid meesha ka baxda xubinimada Aqalka sare ee Beesha Udeejeen.
Madaxtooyada ayaa si weyn ugu lug leh qorista liiska Aqalka sare, iyadoo la sheegay in xubnaha qaar ee liiska Musharaxiinta Aqalka sare ee Maamulka Hirshabeelle laga qoray Madaxtooyada.
Ku dhawaaqista Liiska Musharaxiinta xubnaha Aqalka sare ee Hirshabeelle ayaa dib u dhac ku yimid, waxaana dib u dhaca loo sababeynayaa is qab qabsiga ka dhashay kursiga Beesha Ciise Muddulood ka heli laheyd Gobolka Hiiraan.
Waxgaradka Beesha Muddulood ayaa arrintan u arka mid xadgudub ku miisaanka siyaasadeed ee beesha, maadamaa beelaha Habargidir iyo Majeerteen ay aqalka sare ka heleen min 4 xubnood halka muduloodna ay ka heli doonaan 3 xubnood oo kaliya.
Si kastaba ha ahaatee beelaha Soomaaliyeed ayaa tirsanaya xadgudubyo iyo awood sheegasho lagu sameeyay xuquuqdooda, waxaana xadgudubyada ugu weynaa ay ka dhaceen Maamulada Jubbaland iyo Koofur Galbeed oo saamigii Aqalka sare ay ku lahaayeen Beelo dega goboladaas loo diiday.